Ahoana ny fomba hamonoana ny fampandrenesana amin'ny iPhone | iPhone News
Ahoana ny fomba hamonoana ny fampandrenesana amin'ny iPhone
Ignatius Room | 31/03/2022 18:00 | iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba hamonoana ny fampandrenesana amin'ny iphone, iPad ary iPod touch. Ny fampandrenesana dia mahasoa raha mbola fantatsika ny fomba fitantanana azy ireo, satria raha tsy izany dia mety hivadika amintsika izy ireo ary lasa manelingelina kokoa noho ny mahasoa.
Ny zavatra voalohany tokony hodinihintsika alohan'ny hanesorana ny fampandrenesana dia ny fiheverana ny mety hampanginana azy ireo vetivety. Ny fampandrenesana fampanginana dia matetika no vahaolana tsara indrindra rehefa misy fampiharana manokana (toy ny WhatsApp) tsy mitsahatra mandrora fampandrenesana (indrindra fa avy amin'ny vondrona iray) saingy tsy te hampangina ny vondrona na hanakana ny fampandrenesana fampiharana izahay.
1 Ahoana ny fomba hamonoana ny fampandrenesana amin'ny iPhone
1.1 Fomba 1
1.2 Fomba 2
2 Ahoana ny fampanginana ny fampandrenesana amin'ny iPhone
3 Alefaso ny fampandrenesana amin'ny iPhone
4 Fomba fifantohana amin'ny iOS / iPadOS
4.1 Ahoana ny fomba hamoronana fomba fifantohana manokana
5 Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba fifantohana
iOS dia manolotra antsika fomba roa hanesorana ny fampandrenesana amin'ny iPhone:
Avy amin'ny fampandrenesana momba ny rindranasa izay tiantsika hanesorana ny fampandrenesana (mamelà ny redundancy), dia asianay miankavia izany.
Manaraka, tsindrio eo safidy.
Misafidy ireo safidy samihafa aseho izahay deactivate.
Manomboka izao dia tsy haneho fampandrenesana amin'ny fitaovantsika ny fampiharana mandra-pahetsika azy ireo indray.
Ny fomba faharoa hanesorana ny fampandrenesana amin'ny iPhone dia tsy dia intuitive ary mitaky ny hidirana amin'ny safidy fanamafisana iOS amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ireo dingana asehoko anao eto ambany:
Avy amin'ny efijery an-trano no ahitantsika ny Fikirana an'ny iPhone.
Manaraka, tsindrio eo Notifications.
Manaraka, mifidy ny app tiana esorina ny fampahafantarana.
Ao anatin'ny safidin'ny fampandrenesana fampiharana, foinay ny switch Alefaso fampandrenesana.
Ahoana ny fampanginana ny fampandrenesana amin'ny iPhone
Raha tokony hamono ny fampandrenesana rehetra amin'ny fampiharana iray ary hanakana antsika tsy hanadino ny hamerina azy ireo, ny safidy tsara indrindra dia ny mampangina azy ireo mandritra ny fotoana voafaritra.
Apple dia mamela antsika hampanginana ny fampandrenesana mandritra ny adiny iray sy mandritra ny andro. Mba hampanginana ny fampandrenesana amin'ny iPhone dia tsy maintsy manaraka ny dingana asehoko anao eto ambany isika:
Alefantsika miankavia izay fampandrenesana momba ny fampiharana.
Misafidy ireo safidy samihafa aseho izahay
mangina 1 ora
Raha manohy mandefa fampandrenesana aorian'ny fotoana nametrahanay ny fampiharana dia afaka mampangina azy ireo indray izahay amin'ny fanatanterahana ireo dingana mitovy.
Alefaso ny fampandrenesana amin'ny iPhone
Ny fampiharana sasany, isaky ny manokatra azy ireo izahay (toy ny WhatsApp) dia jereo raha misy fampandrenesana mihetsika. Raha tsy izany dia manasa antsika hamerina azy ireo. Raha toa ka ny fampiharana izay nanafoana ny fampandrenesana, dia tsy mampiseho antsika ny fidirana ho afaka hampavitrika azy ireo indray, dia tsy maintsy manao ny dingana izay hasehoko anao eto ambany:
Ao anatin'ny safidin'ny fampandrenesana fampiharana, navotsotra ny switch Alefaso fampandrenesana.
Fomba fifantohana amin'ny iOS / iPadOS
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 15 sy macOS Monterey, Apple dia nampiditra endri-javatra vaovao antsoina hoe Fomba fampifantohana.
Ireo fomba fifantohana ireo dia mifototra amin'ny fomba mahazatra iOS Aza manelingelina. Izy ireo dia mifototra amin'ny fomba Aza manelingelina, fa mamela antsika hanitsy izay rindranasa tiantsika hanehoana fampandrenesana eo amin'ny efijery ary handefa feo rehefa mihetsika izy ireo.
Natively, iOS dia mamela antsika hamorona ireto fomba manaraka ireto:
Ny tsirairay amin'ireo maodely ireo dia mametraka fanamafisam-peo manokana natao manokana ho azy. Ohatra, raha mampiasa ny maodely mitondra fiara isika, raha mbola mavitrika izany, ny iPhone:
Hampangina ny fampandrenesana sy ny bitsika rehetra izany.
Lazainy amin'ireo mpifandray amintsika fa misy fampandrenesana nampangina ary mamela azy ireo handefa fampandrenesana raha toa ka raharaha maika izany (tsy misy afa-tsy amin'ny fitaovana iOS).
Raha toa ka tsy manana fitaovana iOS na macOS ilay olona manandrana mifandray aminao raha mbola mandeha ity fomba ity, dia handefa valiny mandeha ho azy izy ireo hampahafantatra azy fa tsy misy izahay (amin'ny alàlan'ny SMS).
Ahoana ny fomba hamoronana fomba fifantohana manokana
Na dia ny maodely fifantohana atolotry ny Apple antsika aza dia mety amin'ny toe-javatra rehetra, ary mamela antsika hanamboatra izay mety ho olona Hanketo amin'izay fomba hifandraisana aminay, ny tsara indrindra dia ny mamorona izay mifanaraka amin'ny filantsika.
Mba hamoronana fomba fifantohana manokana dia tsy maintsy manao ireto dingana manaraka ireto isika:
Voalohany, mandeha any amin'ny Settings ny fitaovanay izahay.
Ao amin'ny Settings, tsindrio ny Concentration modes ary tsindrio ny marika plus hita eo amin'ny zoro havanana ambony.
Manaraka, tsindrio ny Custom.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny mametraka ny anaran'ny fomba izay hoforonintsika, safidio ny kisary tiantsika hanehoana azy sy ny loko mifanaraka aminy.
Avy eo ao amin'ilay faritra Navela ny olona, tsindrio ny + marika Add ary fidio ny olona rehetra afaka mifandray aminay, na dia efa navitrika ity fomba ity aza izahay.
Raha tsy tiantsika izany tena tsy misy manelingelina antsika mihitsy raha toa ka mampandeha ity fomba ity, ao amin'ny fizarana Olon-kafa no fidintsika tsy misy olona.
Kitiho ny Allow raha te hanohizana ny fanamboarana ity fomba ity.
Ao amin'ny varavarankely manaraka dia tsy maintsy misafidy ireo rindranasa izay afaka mandefa fampandrenesana ho antsika isika raha toa ka miasa ity fomba ity.
Azo inoana fa ny fampiharana sasany dia aseho amin'ny alàlan'ny default, fampiharana izay azontsika fafana amin'ny fipihana vonoy daholo.
Raha hisafidianana ireo rindranasa tiana ampiana amin'ny tanana, tsindrio ny + famantarana Add ao amin'ny fizarana Allowed Apps.
Ao amin'ny fizarana Apps hafa, azontsika atao ny manamarina ny boaty manan-danja. Ity boaty fanamarihana ity dia ahafahan'ny rindranasa hafa tsy tafiditra ao anatin'ireo navela handefa fampandrenesana voamarika ho zava-dehibe.
Rehefa avy namorona ny fomba fifantohana isika dia afaka manitsy izany mba hanampiana na hanesorana fampiharana bebe kokoa. Ho fanampin'izay, azontsika atao ihany koa ny manitsy ny maody mba hampavitrika sy hanefa amin'ny alàlan'ny automatique na mifototra amin'ny fandaharam-potoana.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba fifantohana
Rehefa avy namorona ny fomba fifantohana izay noforonintsika isika dia tsy maintsy manaraka ireto dingana ireto:
Miditra amin'ny foibe fanaraha-maso izahay amin'ny alàlan'ny fanosehana ny rantsan-tànanao avy eo amin'ny farany havanana amin'ny efijery (na avy any ambany raha iPhone 8 na taloha).
Manaraka, tsindrio ny Concentration mba hampisehoana ny fomba rehetra misy.
Raha tiantsika ny hampavitrika azy mandra-pamonoana azy amin'ny tanana dia tsindrio azy io.
Saingy, raha tiantsika ny hampavitrika azy mandritra ny adiny iray, mandra-pahatongan'ny ampitso na mandra-pialantsika amin'ny toerana misy antsika, dia tsindrio ny teboka 3 marindrano izay eo ankavanan'ny anaran'ny maody.
Ny kisary amin'ny fomba napetraka dia haseho eo an-tampon'ny efijery sy eo amin'ny efijery hidin-trano. Amin'izany fomba izany dia ho fantatsika haingana raha manana fomba fifantohana isika ary inona izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hamonoana ny fampandrenesana amin'ny iPhone
Apple dia namoaka iOS 15.4.1 hamahana ny olana momba ny bateria
iPhones miaraka amin'ny Touch ID eo ambanin'ny efijery dia hahemotra taona maromaro